प्रभु इन्स्योरेन्स : कम्पनी प्रोफाइल (मंगलवार, ४ फागुन २०७७)
यस कम्पनीले गत वर्षभन्दा कम लाभांश आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष १६ दशमलव ८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले यस वर्ष १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
गत वर्ष १६ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले यस वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख ७५ हजार रहेको छ ।
सोही पुँजीको आधारमा नियामक निकाय बीमा समितिको स्वीकृति र आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि लाभांश वितरण हुनेछ । यस कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म रु. ८ करोड ४९ लाख ४९ हजार खुद नाफा गरेको छ ।
यस अवधिसम्म रु. ८६ करोड ४९ लाख ९२ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले रु. १४ करोड ५९ लाख ५ हजार कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । सोमबार कम्पनीको अन्तिम शेयर मूल्य रु. ९८० कायम भएको छ ।
कम्पनीको ६३ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो ह्याम्मर बनेको छ । यस्तो आकृतिले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ६४ दशमलव ९७ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन २३ दशमलव ३७ बिन्दुमा छ । उतारचढाव उच्च रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम प्राप्त हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेज २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कादेखि टाढिएको छ । हालको मूल्यरेखाले १४ दिने मूल्यरेखालाई काटेर तल झरेको छ । सोमबारको शेयर मूल्य रु. ९८० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य सस्तिए रु. ९३३ मा टेवा पाउने र महँगिए रु. ९९५ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।